I-31 BLUSHMAIDRESS DRESSES UKUBA UCINGA NGEPINKI - UBUDLELWANE
Eyona Ubudlelwane I-31 Blush Girl Bridesmaid enxiba Iqela lakho lomtshato liya kuthanda
I-31 Blush Girl Bridesmaid enxiba Iqela lakho lomtshato liya kuthanda
Lo mthunzi ubhetyebhetye usebenza kuyo nayiphi na indawo kunye nesitayile. Thenga ukhetho olude nolufutshane kwitheko lakho lomtshato apha. Ukuhlaziywa ngoMeyi 29, 2019 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Asinakufumana ngokwaneleyo iilokhwe zomtshato ezitshatileyo kwimitshato yasentwasahlobo nasehlotyeni. Kwaye, ewe, umthunzi wepinki uhle wedwa, kodwa elona candelo lililo malunga nomoya, umbala wobufazi kukuba uyathandeka kuluhlu olubanzi lweetoni zolusu kwaye isebenza ngeendlela ezininzi zomtshato. Thatha iilokhwe zomtshato ezitshatileyo ezinothuli, ezihamba ngenxa yemvelo yazo, uthando lwezithandani. Kwiflipside, iilokhwe zomtshato ezitshatileyo eziluhlaza ezinemigca engaphantsi yegolide yenye yeendlela ezimangalisayo zentsimbi yeklasikhi esemthethweni, ethembekileyo. Nokuba uphosa umtshato wasefama oqhelekileyo okanye umtya omnyama wepeyinti, umbala omdaka wepeyinti wenzela itheko lomtshato elihle. Qhubeka uskrola ukuya kuthenga ezinye zeelokhwe ezithandayo ezipinki ezipinki, esizokwahlula ngobude ukuze zilungele ikhowudi yakho yokunxiba. (Ukukhangela i-blush Unxiba umolokazana ngobukhulu obukhulu ? Uninzi lwezi gown ziza kuzo.)
Iingubo ezinde zeBlowsmaid dress
Iingubo ezimfutshane zoMtshakazi oMdaka
Ukuthetha ngokubanzi, okukhona umgama omde ungaphezulu, isinxibo sisesikweni ngakumbi. Kodwa uyakonwaba ukufumana omabini amaqhina amnyama- kunye nomtshato wasemva kwendlu ofanelekileyo ukuba ulokhwe onobuhle onxibe kuluhlu.
Le ilokhwe yangoku, igxalaba elinye elinombala omdaka ngombala womtshakazi (ofumaneka ngobukhulu obudibeneyo, njengoko uninzi lweedilesi zoMtshakazi zilapha) ludlula ubucukubhede. Sithathele ingqalelo ubume obucekeceke, obuncinci kunye nehemetric skirt skirt.
Amanzi Isinxibo sencwadi yomtshakazi kwi-Pink Tulip, ukusuka kwi- $ 285, Brideside.com
Molo, intamo ekhethekileyo! Olu luyilo luphucula i-V-intamo yeklasikhi, ingubo ye-A-line enekristale egudileyo esifubeni etsiba imfuno yomqala. Ngcono ngoku, zonke iigawuni Ukudana zithwala ziza ngobukhulu obukhulu.
UJenny Packham I-JP1005 isinxibo somtshakazi eRose PANTONE Rose Quartz, ukusuka kwi- $ 305, UnguDessy.com
Ukuba uzingela ilokhwe elula yomtshati, zama le ndlela yokulinganisa. Inentamo yokuntywila ye-chic kunye ne-strappy back.
Siza Kubane Isinxibo somtshakazi kaGemini eBlush, ukusuka kwi- $ 180, Brideside.com
Kukho iitoni zelokhwe yangoku epinki enxibe ilokhwe, kubandakanya le kholamu ilokhwe intle. Jonga loo mesh neckline iphakamileyo! Itholakala ngobukhulu 0 ukuya ku-30.
Umtshakazi kaDavid ilokhwe ende enemingxunya emnxebeni kwiBallet, ukusuka kwi- $ 130, Ngobubele.com
Iingubo zentsimbi ezitshatileyo zine-ultra-romantic, ke ngokwendalo sifake ezimbalwa. Le inezinto zokuhombisa ezingasentla phezulu kunye nesiketi esityibilikayo esisezantsi ezantsi.
Amanzi Isinxibo sikaFiona somtshakazi eBlush, ukusuka kwi- $ 330, kwi-Brideside.com
Sifumene ukhetho kuwo wonke umntu kwiqela lakho lomtshato, kubandakanya nelona lincinci ilungu. Xa kufikwa ekunxibeni iilokhwe ezincinci zomtshato, le gown ye-chiffon ingekho mathandabuzo intle. Ikwabubungqina bokuba 'blush' luluhlu lwee-pastel shades, ukusuka ekukhanyeni, ezipinki ezipinki kule khorali ithuleyo, ikhrim.
Ukuqokelelwa kweDessy I-JR548 isinxibo somtshakazi esincinci kwiPeaches kunye neCream, ukusuka kwi- $ 206, UnguDessy.com
Ayisiyiyo kuphela into yokuba abathengisi kolujikelezo baphethe i-blush kunye neempahla zokunxiba ezitshatileyo kunye neempahla zokunxiba ezitshatileyo, kodwa banazo neempahla zokubeleka. Olu hlobo lweentyatyambo luphuphile kakhulu kwaye luyilo oluhle kakhulu. Eli ikwalilo ixesha lokukhankanya ukuba ungadlala ngokupheleleyo ngokuprinta.
Emva kwelesithandathu - M424 isinxibo somtshakazi okhulelweyo eBlush Garden, ukusuka kwi- $ 284, UnguDessy.com
I-FYI, awukhawulelwanga kwimpahla enxibayo intombi. Ukuthatha okuphucukileyo okwangoku, zama ukuba blush Unxiba iimpahla zokutshata . Esi sitayile segolide siphakame ngokukhawuleza sinamehlo eenkwenkwezi.
Ukudana I-Arielle LS shimmer bridesmaid jumpsuit kwi-Blush Gold, ukusuka kwi- $ 290, UnguDessy.com
Le mikhono ilungelelanisiweyo yokunxiba iya kuguqula itheko lakho labatshatileyo libe ngumgaqo woothixokazi bamaGrisi. (Qaphela ukuba iigawuni zingena kuphela ezimbini, ezingaqhelekanga 'zilingana kakhulu' nobukhulu.)
Iintaka ezimbini Inew York ingubo yebhola ye-tulle ePetal Tulle, $ 340, Intaka ezimbiniNewYork.com
I-neckline ye-off-the-shoulder iyonke ingqumbo. Le ilokhwe ilula, intyatyambo ibhinqa elihlazileyo enxibe isinxibo esikhulu kunye nomtshato omkhulu waselwandle. '
Ndibonise uMumu wakho UHacienda egxadeni elinxibe ilokhwe yangokuhlwa eDusty Blush, $ 172, Imvu.com
Khawufane ucinge nje ukuba iintombi zakho zijika iintloko kule ndawo imnandi, iphatheni yeentyatyambo.
Isilayidi kunye neWillow Isinxibo se-Pink Floral Fields se-Maxi, ukusuka kwi- $ 40 ukuya kwirente, RenttheRunway.com
Iingubo zeentombi zegolide ezingaphantsi kwe-100
Nalu olunye ukhetho lwegolide. Le mpahla iluhlaza ilandelayo ibhinqa elingaphezulu elinombala omdaka ngombhinqo obotshiweyo kunye nesiketi segeorgette.
Umtshakazi kaDavid Isinxibo esinde se-blouson somtshakazi kuRose Gold, ukusuka kwi- $ 180, Ngobubele.com
Uyakuthanda ukujonga kweengubo ezisekwe egxalabeni? Cinga ngale mpahla ilokhwe ilokhwe ibhinqa elinombhinqo kunye nomtsalane (kodwa hayi kakhulu).
Bella iintombi Isinxibo se-BB120 kwi-Blush, ixabiso ngesicelo, UnguDessy.com
Okanye, zama isitayela esinye segxalaba. Siyayithanda le mpahla yokunxiba ilumkileyo kwaye imile okomlenze.
Emva kwelesithandathu Ingubo ka 6769 yomtshakazi eRose PANTONE Rose Quartz, ukusuka kwi- $ 263, UnguDessy.com
Ukuba ngenene ufuna ukwenza ngokwezifiso i-ensembles yakho yomtshato, zama ukuba ngumtshakazi oqaqambileyo. Esi siqwenga siqinileyo silungelelanisa kakuhle kunye nesiketi sokushicilela seentyatyambo.
UJenny Yoo U-Emerson cami kwi-Blush, ukusuka kwi- $ 75, i-Brideside.com; UJenny Yoo I-Hampton yokuprinta isiketi kwiWatercolor Blush, ukusuka kwi- $ 235, Brideside.com
Ekuzingeleni imikhono emide? Le lokhwe ilokhwe iluhlazana ilokhwe iyamangalisa. Jonga loo V-intamo ye-scalloped.
Ukuqokelelwa kweDessy Uhlobo lwesinxibo somtshakazi ezingama-3014 eBlush, ukusuka kwi- $ 278, UnguDessy.com
Isinxibo esingenangxabano sikhangeleka sicocekile ngaphambili, kodwa ezemidlalo ziyinkomo ephantsi ebuyela kumdlalo ongalindelekanga.
Uthweswe isidanga Biza igama lam unxibe ilokhwe engenamqolo kwi-Blush Pink, $ 98, Lulus.com
Asinakufumana ngokwaneleyo iilokhwe zomtshato zelokhwe! Oku Ukhetho lunentamo ephezulu, ubuyile umva kunye nengubo yexilongo efihlakeleyo.
Ukudana Isinxibo somtshakazi ezingama-2995 eBlush, ukusuka kwi- $ 284, UnguDessy.com
Ukunxiba iqela lakho leqela lokudlala ibhola? Esi silokhwe somyeni sitshatileyo, esimdaka sichaza ubuhle obungenamandla.
Amanzi Isinxibo sikaMason somtshakazi kwiBallet Slipper, ukusuka kwi- $ 310, Brideside.com
Siyabheja ukuba uyibonile le blush intombi ilokhwe iluhlaza kuyo yonke i-Instagram feed yakho. Ngoku, unokwenza i-Art Deco stunner ibe yeyakho.
UAdrianna Papell I-bladed blown e-Taupe Pink, eqala kwi- $ 260, AdriannaPapell.com
Ukuthengela iilokhwe zomtshato ezipinki zesintu? I-neckline engathandekiyo yesithandwa kunye ne-A-line skirt enomtsalane ifana neklasikhi njengoko beza.
Wtoo Isinxibo somtshakazi esingama-904 eChateau-Rose, $ 210, kwiBrideside.com
Yiza ne-wow factor. Oku kunxiba, igxalaba elibandayo elinombala opinki onxibayo intombi zonke iintlobo zobungangamsha.
Mhlophe nguVera Wang Umkhono omde obandayo wegxalaba lomtshakazi onxibe umtshakazi ePetal, ukusuka kwi- $ 200, Ngobubele.com
Nokuba uzama ukugcina izinto ezingezizo ezisesikweni okanye ufuna ukunika imilenze yamantombazana akho inkululeko engakumbi yokugungqa kumgangatho wokudanisa, sifumene iilokhwe ezimfutshane eziluhlaza ezilungiselela iimfuno zakho.
Siza kukhaba izinto kunye nale fockless strapless frock. Isinxibo somtshakazi sothuli esinothuli sinentombazana entle kwaye siyabongoza ukuba siyokunceda amantombazana akho ajikeleze ubusuku bonke.
UJenny Yoo Isinxibo sikaEmmie kuRosewater, ukusuka kwi- $ 265, Brideside.com
Esi sikhwama sipinki sipinki sixhamla kwi-neckline yesikhephe. Hayi indlela entle ngayo iMeghan Markle-esque!
UAlfred Sung Isitayela se-D771 isinxibo somtshakazi eBlush, $ 208, UnguDessy.com
Silapha kule mfutshane, ilokhwe etshatileyo enemibala eqaqambileyo, igqityiwe nge-halter neckline. Ilula, inzima kwaye iyafumaneka ngobukhulu obudibeneyo.
Umtshakazi kaDavid Y-intambo enemingxuma emfutshane enxibe umtshakazi ePetal, ukusuka kwi- $ 109, Ngobubele.com
Ukuthengela Iimpahla zokutshata ezifikelelekayo ? Le ndleko yobukhulu bengubo ingaphantsi kweedola ezili-100, kodwa amagxalaba ayo amenyezelisiweyo ayenza ibukeke ibiza kakhulu.
I-TFNC Kunye nomtshakazi kuphela osongele ngengubo ye-midi ngePinki, $ 87, ASOS.com
Mfutshane akuthethi ukuba ubude bamadolo okanye ubude bethanga. Cinga ngeendlela eziphakathi kunye nezisezantsi kakhulu. Le ilokhwe ye-asymmetrical blush junior bridesmaid imnandi kakhulu.
Ukuqokelelwa kweDessy I-JR534 isinxibo somtshakazi omncinci eBlossom, ukusuka kwi- $ 221, UnguDessy.com
Nantsi enye ingubo yomtshato omncinci omncinci kunye neentloni, ngeli xesha ngentambo entle yegolide.
Umtshakazi kaDavid Amantombazana amafutshane angenamikhono enxibe iRose Gold Metallic, ukusuka kwi- $ 90, Ngobubele.com
Ewe kunjalo, kubantu abadala kwiqela labasebenzi bakho, kukho iilokhwe ezimfutshane ezinomtsalane zelokhwe. Le ndlela yobude beti ilungele umtshato wegadi.
Studio yoyilo Isinxibo seentombi ezingama-4522 eDusty Rose kunye neBlush, ixabiso ngesicelo, UnguDessy.com
Konke malunga neelokhwe zomtshato zelokhwe ezinothuli? Le frock ithulisiweyo epinki inemikhono egudileyo kunye neyona ileyisi ipholileyo ifaka. Ikwintle kakhulu ukuba ifikeleleke.
Uyilo lwe-ASOS Isambatho se-curve midi kunye ne-godet lace ifaka kwi-Dusty Pink, $ 72, ASOS.com
Ufuna ngaphezulu? Jonga iitoni zelokhwe entle yomtshakazi yokuthenga ngoku.
Amakhitshi amhlophe e-quartz
Iingoma zothando zespanish eziguqulelwe kwisingesi
izimvo zekhabhinethi ezingwevu
Imilinganiselo yeshelufu yekhabethe
isuti eluhlaza okwesibhakabhaka izihlangu ezimdaka